« Zava-dehibe ny tsy fahatongavan’ny FFKM tao Mahamasina » hoy Guy Maxime – MyDago.com aime Madagascar
Toy ny mahazatra dia nitohy ny tolona teto amin’ny Magro Behoririka ny 27 Jona 2011.
Ny solon-tenan’ny Moramanga , Ignace dia nilaza fa “feuille de route amendée” fa tsy ilay tany Ivato no soniavina ary eto Madagasikara no tokony hanaovana izany ka hiomantsika hiaro ny ain’ny filohantsika tahaka ny 2002 satria miresaka amin’ny olona adala na mody adala isika.
Tamin’ny herinandro i Andry niteny fa tsy ilaina ny fankatoavana iraisam-pirenena, herinandro aty aoriana indray dia ilaina hoy izy. Tsy misy tsikelikely izany ny fankatoavana iraisam-pirenena fa rehefa mifanaraka ny malagasy dia tonga tahaka ny vita Maputo sy Addis Abeba. Ankoatra ny ambadika politika hafa dia tsy fantatra ny antony natongavany ireny ambasadoaro ireny teny Mahamasina hoy I Ignace.
Manoela : matoky an’ i Ravalomanana isika fa tsy hisy hiova ny fanampahan-kevitra tany Sandton ary ingahy Simao dia tsy ilaina hanelanelana eto Madagasikara intsony. Tsy miova iny raha tsy hoe angamba miteny hoe miala i Andry Rajoelina?. Inona moa no ilain’i Ravalomanana amnistie ?hoy I Manoela. I Razanamasoa no nanao kolikoly be indrindra teto amin’ny fitsarana koa dia niakatra CODIS ary affectée mihitsy izy.
Mbola miantso ny FFKM ihany aho hoy I Manoela handamina ny raharaha fa rehefa tsy hiresaka dia aleo hikorontana.
Depioté Henri : niteraka resabe teto amin’ny firenena ny tenin’ny filoha Ravalomanana hoe akinina amin’Andriamanitra ny daty hiverenako. Marina tokoa io satria dia napetraka teo an-tananan’Andriamanitra ny tolona hatramin’zay ka tsy hiala aminy isika. Ny Tompo anefa tsy manampy izay tsy manampy ny tenany ka miasa isika andro aman’alina.
Ny tohiny ny tapaka tany Sandton ihany no andrasana. Mihamazava koa ankehitriny fa tsy irakan’ny Sadc i Simao fa hitondra ilay taratasin’i Salomao.
Na misy aza ny hafahafa dia omena voninahitra ny tafika ary misaotra ny radio Don Bosco nandefa ny kabarin’i Ravalomanana fa dia niely eran’ny nosy ilay izy.
Aza mirohoroho saina fa hamafiso ny finoana fa tsy i Torkia izay tsy ao anatiny ny UE no handidy.
Ben’ny tanana Guy Maxime : zava-dehibe ny tsy fahatongavan’ny FFKM tao Mahamasina, miasa tokoa ny Tompo ary mbola isika fa hitondra fampihavanana amin’ny malagasy ny FFKM.
Noravaina ny kaomina Toamasina satria tsy nisy vita ny fampanantenana. Isika malagasy sisa no mbola maha eo an’ i Rajoelina, betsaka anefa ny hetsika manohitra ny FAT eran’i Madagasikara ary betsaka ihany koa ny resaka etsy sy eroa fa tsy hamaha ny krizy mihitsy ny maha filoha an’i Andry. Raha zéro tokoa ny governemantaVital dia Andry mba firy? Tsy maintsy avotana ny firenena ary indrindra ny vahoaka ka mody ireo na tianareo na tsia.
Depioté Rodin : raha izaho ny FAT dia menatra tanteraka satria dia mizara loatra ireo vahoaka ka tsy miara makalaza ny fetim-pireneny.Efa nisy Oudraougo sy Dramé teto ary izao dia hita ny fomba fiasan’i Simao.
Auteur Solo Razafy*Publié le 27 juin 2011 28 juin 2011 Catégories Politique
Précédent Article précédent : Vehivavy TIM : tsy maintsy mody i « Dada »
Suivant Article suivant : Lasa mpisolovavan’i Rajoelina i Père Pedro?